China anopenya Lapel Pins fekitari uye vagadziri | Kingtai
Kupenya kunogadzirwa nemadiki sequins (kazhinji saizi yepepuru) inoratidza mwenje.
Takaziva kubva kuPrimary chikoro kuti kupenya kune chekuita nemabasa edu emaoko kana kushongedzwa kweKisimusi.
Nekuda kwekuita kwayo kwakanakisa, kubwinya kunoshandiswawo zvakanyanya muBaseball Trading pini, ayo anotengeswa gore rega rega muCooperstown, Pennsylvania.
Uya nemabling pamapini ako emagetsi uchishandisa kupenya
Glitter inowanzo shandiswa kusimbisa zita rechikwata kana kushongedza mascot ayo.Iyo inouya mune akawanda mavara, anosanganisira matsvuku, bhuruu, yero, girini, orenji, pink, nhema, chena zvichingodaro.
Hazvina basa kudzikisira sarudzo dzako kunzvimbo imwechete. Iwe unogona kuisa kupenya chero kwaunoda. Kazhinji, mutengo wetsika imwe neimwe isendi gumi nemashanu. Nekudaro, semuenzaniso, kana iwe uchida kupenya pini yako yekutengesa padenga uye mascot, inozodhura makumi matatu nepini imwe sezvo ichiwedzerwa kune inopfuura imwechete pini tsanangudzo. Zvisinei, iwe unoona, zvese zvinopenya igoridhe.
Inobata kupenya kwezuva uye inoita yako tsika yekutengesa pini kupenya! Izvo zvinopenya zvinoonekwa sezvakakosha!
Iyo inopenya pini, kunyanya vamwe vatambi vanoda kuichinja!
Hunhu hwechiedza cheupfu ndechekusimudzira zvinoonekwa zvechigadzirwa, kuitira kuti zvikamu zvekushongedza zviite concave convex kunzwa uye nekuwedzera mativi-matatu.
Hunhu hwayo ndehwekuti: kupenya kwakapenya kwemwenje kunoita kuti kushongedzwa kuve kwakanyanya, kupenya uye kujeka muzuva. Ivo vanogadzira akakosha, anotora-maziso mhedzisiro, senge kushongedza kana kuratidza.
Iko hakuna kupokana kuti isu tinogona kuwedzera iyo inopenya enamel kara kuita yako enamel mapini kupenya.
Isu tinowanzo sarudza iyo yeupfu poda padyo padyo neicho chinoonekwa zvinoenderana nekodhi kodhi iyo dhizaini yako inoratidza.
Nekudaro, mune ino yakajairika kesi, imwe yekutsva poda inopenya mamwe mavara, saka ichave iri gaka pakati peyako yekutanga pfungwa yeiyo flash enamel kupfeka.
Pano, avo vanoteedzera kukwana vanofanirwa kubhadhara zvakanyanya kune ino pfungwa;
Kana iwe uchida iwo akasimba color flash upfu, kana imwe vara ye flash upfu, kuitira kudzivirira matambudziko emangwana, ndokumbira ubvunze vashandi vedu vekutengesa kuti vakupe mienzaniso yekudhirowa yekusimbisa musati kugadzirwa kwemazhinji eakagadzirwa anopenya enamel pini.
Pashure: Dhijitari Dhinda lapel pini
Zvadaro: Vhenekera murima Lapel Pins